VaTsvangirai Vopihwa Mubairo weKurwira Kodzero dzeVanhu
Kubvumbi 30, 2010
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vadomwa nesangano reNational Democratic Institute remuWashington DC muAmerica, kuti vawane mubairo wekurwira kodzero dzevanhu.
VaTsvangirai vadomwa pamwe nesangano reNetwork of Choco Women of Colombia. VaTsvangirai vachapihwa mubairo uyu musi wa10 Chivabvu nevaimbova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muaAmerica, Amai Madeleine Albright, vanova sachigaro weNDI.
Sangano iri rinoti VaTsvangirai vari kushanda mukusimudzira runyararo pamwe nekuunza shanduko muZimbabwe. Sangano iri rinoti VaTsvangirai vachapihwa mubairo weW. Averell Harriman Democracy Award uyo unopihwa vanhu kana sangano rinenge ratidza kuzvipira kwakanyanya munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu.
Hatina kukwanisa kubata vatsvangirai kuti tinzwe kuti vanotambira seyi ruremekedzo urwu. Vaandrew makoni ndivo sachigaro vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. VaMakoni vanoti VaTsvangirai vakakodzera kuti vawane mubairo uyu.
Hurukuro naVaAndrew Makoni